Deegaanka Waa Nolosheena(Maqaal) • Horseed Media
You are here: Home / Opinion / Deegaanka Waa Nolosheena(Maqaal)
February 7, 2017 - By: HORSEED STAFF
1. Waa maxay Deegaan?
2. Waa maxay farqiga u dhaxeeya xaaladaha Deegaanka Soomaaliya shalay iyo maanta ?
3. Waa maxay faa’idooyinka ay dhirtu u leedahay deegaanka?
4. Waa maxay caqabadaha haysta Deegaanadda Afrika sida Soomaliya?
5. Sidee ayaa loo xalin karaa dhibaatooyinka deegaanka haysta ama looga hortagikaraa?
6. Tallo soo-jeedin iyo gunaanad?
1. Xaalufinta Dhirta,Daaqa,Duurjoogta,Dugaaga iyo Duunyada.
2. Bacdu waxaa ay dhibaato ku haysaa deegaamada laga isticmaalo, waxaa ay si sahlan u dishaa dhirta iyo xoolaha, waxayna keentaa cuduro badan oo ku dhaca dadka iyo duunyada.
3. Dhirta la jarayo ayaa loo adeegsadaa in laga dhigto dhuxul, dhul badan oo ahaan jiray kaymo ayaa isu badalay lama degaan,waxaa dhulkaas ku soo noqnoqday abaaro is daba jooga.
4. Isbedelka cimilada iyo fatahaadaha Webiyada,Baddaha,Togaga,Harooyinka iyo Laasaska.
5. Xasilooni la’aan siyaasadeed sida dagaal shisheeye,colaad sokeeye iyo dagaal beeleed.
6. Dhul dullaysiga iyo carro nafaqo ka masaxidda (land degradation and soil erosion).
7. Isbedelka cimilada oo keeney inay Roobabkii raagaan,yaraadaan,mar marka qaarna laba waayaba.
8. Geedka garan-waaga oo musiibo deegaan ku noqday dhamaan dhulka Soomaalida.
9. Bacaad guur-guur (sand dune).
10. Heerka dhaqaalaha iyo aqoonta oo hooseysa.
11. Tirada dadka oo si xad dhaafa u kordhaysa.